Ama-Proteas esifazane akhela kuhambo lwabo lwendebe yomhlaba
Ama-Momentum Proteas ahlangane e-Cricket South Africa (CSA) Centre of Excellence ePitoli namhlanje kwikhempu yesizwe ezophela ngoMgqibelo, 16 September. Okokuqala iqembu lihlangana kusukela imidlalo yabo ye-ICC Women’s World Cup, lapho abaqeda khona kwinombolo yesithathu. Iqembu lizohlangana ne-Powerade Women’s National Academy, asevele befikile kwi-Centre of Excellence bezohlala amasonto ayisithupha.
Abadlali abadlale indima kwi-KIA Super League ephele zololokhu e-England abekho kwikhempu kubalwa; u-Marizanne Kapp, u-Lizelle Lee, u-Sune Luus no-Mignon du Preez, kodwa lonke iqembu lendebe yomhlaba (okubalwa khona abane kanye kokapteni, u- Dané van Niekerk) bazobe bekhona kwi-Momentum Season launch ezobanjelwa ekhaya le-Momentum e-Centurion ngoLwesibili.
Umqeqeshi weqembu, u-Hilton Moreeng ufuna ukusebenzisa ikhempu njengethuba lokubheka ukuthi abadlali bakuphi ngomzimba kanye nemcabango emuva kokunikwa isikhathi esinwetshiwe sokuphumula ekupheleni kwendebe yomhlaba. Uphinde afune ukuqala ukuthola indlela eyaphambili njengeqembu futhi baqale indlela eya kumqhudelwano ka-2021.
“Kube isikhathi sokuphumula sabadlali,” kusho u-Moreeng. “Iningi labo bebedlala ikhilikithi eningi kusondela indebe yomhlaba futhi, ngaphandle kwalaba abadlale kwi-Super League emuva kwendebe yomhlaba, besifuna abadlali bathole ukuphumula okunwetshiwe ukuze imizimba kanye nezingqondo zithole ukululama ngaphambi kwe-season ezayo.”
Umqeqeshi ukholelwa ekutheni indebe yomhlaba ihambe indlela ende ukukhanyisa ngomdlalo wabesifazane kanye neqembu kumphakathi wase-South Africa futhi uthemba ukuthi ukusekelwa kuzokhula.
“Ukwesekwa abantu base-Ningizimu Afrika ngesikhathi sendebe yomhlaba bekungalindelwe kanye nothando kumdlalo wabesifazane kanye neqembu kusukela kumqhudelwano sekukhule kakhulu. Bekukuhle ukubona futhi sithemba ukuthi lokhu kungakhula kwedlulele ngokuqala kwe-season,” u-Moreeng eqhubeka.
“Nokho kuzoba nekhefu elifushane kwikhilikithi yomhlaba eqenjini, sizoba no-2018 ophithene kunekhilikithi eningi sibhekene namaqembu amakhulu emhlabeni futhi mina ngithemba ukuthi iqembu lethu lizobona ukwesekwa kubalandeli bekhilikithi uma bebuyela emdlalweni.”
“Okwamanje, ngifuna ukuthi sisebenzise esakufunda kwindebe yomhlaba njengokudlulela phambili kube okokhulu eqenjini. Le khempu izokwenza kahle ekusikhombiseni ukuthi abadlali bazisebenzisile yini ezifundo futhi bazokwenza kahle ekukhombiseni abadlali abasha kwi-Academy ukuthi izinga liphuzulu kangakanani eqenjini lesizwe.”
Ukapteni, u-Dané van Niekerk, ongadlalanga kwi-Super League ngenxa ye-Grade 2 myotendinous tear (intra-muscular tear) ngaphambili kwethanga lasesandleni sokudla, ululama kahle futhi ungasekugcineni kokuqeda i-rehabilitation yakhe. Nokho engayona inxenye yekhempu, uzobe ekubhekile ukuhamba kweqembu futhi uthemba ukuthi bazosebenzisa wonke amathuba abawatholayo.
“Kube amasonto anzima ambalwa, kodwa ngiyajabula ukubuya futhi ngithole ukulolonga,” esho ephawula. “Hlezi kukuhle ukuthola iqembu lihlangene, kwikhempu nakwezinye izindawo. Amantombazane hlezi ekujabulela ukubonana futhi ngathi kuhlangana umndeni. Sikhulume kakhulu njengeqembu futhi wonke umuntu ukulangazelele ukubuyela kwiqembu lama-Momentum Proteas futhi baqale basebenzele indebe yomhlaba elandelayo.”
“Sithathe ukuzithemba okuningi kanye nokugqugquzelwa kumqhudelwano walonyaka futhi ukunakwa okunikwa iqembu, sikulangazelele ukuqala indlela entsha futhi sakhe okuzokwenza abantu base-Ningizimu Africa baphinde baziqhenye.”
AmaProteas esifazane anezinombolo ezincomekayo i-CSA ihalalisela amaProteas amathathu ngokufakwa eqenjini le-ICC WWC AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba Yonke imidlalo kumele siyinqobe – uDu Preez uBeaumont no-Taylor banqobisa i-England ngokushaya Wonke umuntu usendaweni enhle ngaphambi kwe-England – uChetty